Ingqiqo njengoBuddhist Practice
Isiseko seBuddhist Practice
Ngokwengqiqo ngokuqhelekileyo yinxalenye yesixhenxe yeNdlela yesibhozo yamaBuddha , kodwa oko akuthethi ukuba yinto yesixhenxe ebaluleke kakhulu. Inxalenye nganye yendlela ixhasa ezinye iindawo ezisixhenxe, kwaye ke kufuneka zicingwe njengezixhamle okanye zenziwe kwiwebhu kunokuba zifakwe kwi-oda yokuqhubela phambili.
Uthisha weZen uTch Nhat Hanh uthi Ukuqonda okufanelekileyo kukusemgangathweni yemfundiso kaBuddha.
"Xa kunengqiqo efanelekileyo, iZiQiniso ezine eziNazileyo kunye nezinye izinto ezisixhenxe zeNdlela yeZibhozo zikhoyo." ( Intliziyo ye-Teaching Buddha , iphe. 59)
Igama elithi Pali for "ingqondo" lithetha (kwiSanskrit, smriti ). I-Sati inokuthi "ukugcina," "ukukhumbula," okanye "ukuphawula." Ingqiqo yinto yolwazi ngomzimba wonke nangomqondo weli xesha. Ukukhumbuza ukuza kubakho ngokugcwele, kungekhona ekulahlekeni kwimizuzu, ukulindela, ukunyaniseka, okanye ukukhathazeka.
Ukuqonda kwakhona kuthetha ukugcina nokukhupha imikhwa yengqondo egcina ingcamango yokuzimela. Oku kubandakanya ukuyeka umkhwa wengqondo yokugweba yonke into ngokungakhathaliseki ukuba siyayithanda okanye ayithandi. Ukuqwalasela ngokupheleleyo kuthetha ukunyamekela ngokupheleleyo into efana nayo-kungukuthi, ungayihlanga yonke into ngeengcamango zethu.
Kutheni Kubalulekile Ukuba Nengqiqo
Kubalulekile ukuqonda ubuBuddha njengendlela yokuziphatha okanye inkqubo ngaphandle kweenkqubo zokukholelwa.
UBuddha akazange afundise iimfundiso malunga nokukhanya, kodwa kunokuba afundise abantu indlela yokufumana ukukhanya ngokwabo. Yaye indlela esaqonda ngayo ukukhanyiselwa ngamava ngokuchanekileyo. Kungenxa yokukhumbula izinto esizifumanayo ngokuthe ngqo, kungekho zihlungi zengqondo okanye izithintelo zengqondo phakathi kwethu nantoni na.
Ven. UHenepola Gunaratana, umonki waseTheravada waseBuddhist kunye nootitshala, uchaza kwincwadi ethi Voice of Insight (edluliselwe nguSharon Salzberg) ukuba ukuqonda kubalulekile ukusinceda sibone ngaphaya kweempawu kunye nemiqondo. "Ingqiqo isengaphambili-mqondiso. Amava okwenene angaphandle kwamagama nangaphezulu kweempawu. "
Ingxenye yesithandathu, yesibhozo nesibhozo yeNdlela yesibhozo - Ilungelo elifanelekileyo , ukuqonda kakuhle, kunye nokugxininisa okulungileyo- kunye kunye nentuthuko yengqondo efunekayo ukusikhulula ekuhluphekeni.
Ukucamngca kuqhutyelwa ezikolweni ezininzi zeBuddha njengenxalenye yentuthuko yengqondo. Igama lesiSanskrit lokucamngca, bhavana , lithetha "inkcubeko yengqondo," kwaye zonke iindidi zobomi beBuddhism zibandakanya ingqondo. Ngokukodwa, i- shamatha ("indawo yokuhlala enoxolo") kucamngca kukhula; Abantu abahleli e-shamatha baqeqesha ngokwabo ukuba bahlale beqaphile kulo mzuzwana wamanje, bejonge baze bakhulule iingcamango endaweni yokuzixosha. Satipatthana vipassana kucamngca yinto efana neyofumaneka kwi- Theravada Buddhism ekubhekiselele ekuphuhliseni ingqondo.
Kwiminyaka yamuva kuye kwaba nomdla okhulayo ekucamngqondweni kwengqondo njengenxalenye yengqondo yengqondo.
Abanye abathintekayo beengqondo bafumanisa ukuba ukucamngca kwengqiqo njengento yokulungelelanisa kunye nokunye unyango kunokunceda abantu abanenkathazo bafunde ukukhulula iimvakalelo eziphosakeleyo kunye nemilinganiselo yokucinga.
Nangona kunjalo, ingqondo-njenge-psychotherapy ayikho ngaphandle kwabagxekayo. Jonga " Ukuphikisana kwengqondo: Ingqiqo njengonyango ."
Iifom ezine zeNgcaciso
UBuddha wathi kukho izibane ezineenkcukacha ngokucinga :
Ingqondo yomzimba ( kayasati ).
Ingqiqo yeemvakalelo okanye iimvakalelo ( vedanasati ).
Ingqondo yengqondo okanye iinkqubo zengqondo ( cittasati ) .
Ukuqonda kwengqondo okanye iimpawu (i- dhammasati ).
Ngaba uye wambona ngokukhawuleza ukuba unentloko yesifo, okanye ukuba izandla zakho zazingabanda, kwaye wazi ukuba uvakalelwa ezi zinto ngexa elithile kodwa ungayithobeli ingqalelo? Ingqondo yomzimba iyinto echasene nayo; ukuba uyazi kakuhle umzimba wakho, iziphelo zakho, amathambo akho, imisipha yakho.
Kwaye into enye iya kuhamba nezinye iifom ze-reference-ngokuziqonda ngokupheleleyo iimvakalelo, ukuqonda iinkqubo zakho zengqondo, uqaphela iziganeko ezikujikelezile.
Iimfundiso ze- Five Skandhas zihambelana nale nto, kwaye zifanelekile ukuhlaziya njengoko uqala ukusebenza ngqondweni.
Imisebenzi emithathu engundoqo
I-Generator Gunaratana ithi ukucabangela kubandakanya imisebenzi emithathu ebalulekileyo.
1. Ukucinga kusikhumbuza oko sifanele senze. Ukuba sihleli ekucamngeni, kusibuyisela kwingcamango yokucamngca. Ukuba sihlamba izitya, kusikhumbuza ukuba sihlawule ngokupheleleyo ukuhlamba izitya.
2. Ngengqiqo, sibona izinto njengoko zinjalo. Inhlonipho i-Gunaratana ibhala ukuba iingcamango zethu zinendlela yokudlulela kwizinto eziyinyani, kwaye iingcamango nezimvo ziphazamisa oko sikufumanayo.
3. Ukuqonda ubona uhlobo lwezinto ezibonakalayo. Ngokukodwa, ngokucatshulwa sibona ngokucacileyo impawu emithathu okanye amanqaku okuba khona - afezekanga, okwethutyana kwaye angabonakali.
Ukutshintsha imilinganiselo yengqondo kunye nemeko yokuphila akulula. Kwaye lo qeqesho alukho into eyenzeka ngexesha lokucamngca, kodwa yonke imini.
Ukuba unomsebenzi wokuhlabelela imihla ngemihla, ukuhlabelela ngendlela ejoliswe kuyo, ngokunyanisekileyo ukuqeqeshwa kwengqondo. Kwakhona kunokuba luncedo ukukhetha umsebenzi othile, njengokulungiselela ukutya, ukucoca i-floor, okanye ukuhamba, kwaye wenze umgudu wokukhumbula ngokupheleleyo umsebenzi njengoko wenzayo. Ekuhambeni kwexesha uzakufumana ubeka ingqalelo ngakumbi kuyo yonke into.
Ootitshala beZen bathi ukuba ulahlekelwa ngumzuzu, uphoswa ubomi bakho. Ubuninzi bethu bompilo esiyiphutheleyo? Khumbula!
I-10 Oscar Ababi kakhulu kwiMbali
Ukulungiselela iNkcazo yeNgeniso
Imbali Yenja: Njani kwaye Kutheni Izinja zazihlala ekhaya